Somaliland: “Madaxweynaha Laba Reer May Soo Saarin, Wuxuu Ka Talinayaa Dhulkan Ay Afarta Milyan & Badhku Wada Leeyihiin” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Madaxweynaha Laba Reer May Soo Saarin, Wuxuu Ka Talinayaa Dhulkan Ay...
Somaliland: “Madaxweynaha Laba Reer May Soo Saarin, Wuxuu Ka Talinayaa Dhulkan Ay Afarta Milyan & Badhku Wada Leeyihiin”
“Madaxweynaha Cusub, Waxaanu Kula Talinaynaa In Dadka Loo Magacaabayo Reeraha La Raali-gelinayo oo……”- Sheekh Aadan-Siiro Oo Ka Hadlay Waxyaabaha Hor-yaalla Madaxweynaha La Doortay
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay Xaaladda Dalku marayo iyo Madaxweynaha cusub ee ku soo baxay Doorashadii 13-kii bishan November ka dhacday Somaliland. Sheekh Aadan-Siiro wuxuu Khudbadda Talooyin ku aroorayo Rasuulkeenna Muxamed (CSW) iyo Asxaabtiisii wanaagsanaa u soo jeediyey Madaxweynaha cusub ee la doortay, waxaanu yidhi “Waxaynu Tilmaamaynaa dhacdooyin uu Rasuulku (CSW) ku mideeyay Dadkii wanaagsanaa. Rasuulku wuxuu sameeyay wax la yidhaahdo ‘Adigu Taada illoow oo Walaalkaa u daa’, si Dadku u midoobaan. Rasuulku (CSW) wuxuu sameeyay Dawlad Iimaaniya oo Dadku wax wada leeyihiin oo ay meel u wada jeedaan, sidaasi darteed Dawladda Cusub waxaanu kula talinaynaa inay qaadato Talooyinka halkan ku jira oo ah kuwii uu bixiyey Nebigu (CSW). Kalmadda ah inaad Dadka iska hor-mariso inta aad taada halkaa dhigato waa si aad Walaalahaa u hesho inaad iyaga u Sed-buriso, taasina waa marka aad doonayso inay Dadku mid noqdaan. Dariiqa aynu maraynaa waa Dariiq dheer, maaha Dariiq Kooxi leedahay, maaha Dariiq Deegaan leeyahay, maaha Dariiq Reer leeyahay, maaha Dariiq Xisbi leeyahay. Dadkani waa Dad Muslimiin ah, waa Dad wada Ahlu-sunne ah, waxay ku kulmayaan waxa weeyaan inay Dadku isku Tanaasulaan, waxay ku kulmayaan waa Kolba ka hayaa inuu ka kale u badiyo, si Ummaddu wax u noqoto.”